बिचित्र संसार – Page4– shubhabihani
Home / बिचित्र संसार (page 4)
यी हुन् विश्वकै सबैभन्दा हट गणित शिक्षिका (फोटोफिचर सहित)
स्कुलमा पढाउनेे सुन्दर शिक्षिकाहरुमा तन्नेरी छात्रहरुको आँखा पर्नु अस्वभाविक होइन । तर एकजना शिक्षिका यस्ती छिन् जसमाथि केवल उक्त विद्यालयका छात्रहरुको मात्र होइन सबैको आँखा लागेको छ । ती शिक्षिका दुनियाकै सबैभन्दा सुन्दर गणित शिक्षिकाको रुपमा सोसल मिडियामा छाइरहेकी छिन् ।
बेलायतको मिनिस्कमा बस्ने ओक्साना नेभेसेलाया पेशाले गणित शिक्षिका हुन् । तर उनी आफ्नो शिक्षण कलाका कारण नभै आफ्नो हट फिगर तथा सुन्दरताका कारण चर्चाको शिखरमा पुगेकी छिन् ।
ओक्सानाले हालै आफ्नो मलेसिया भ्रमणका केही तस्वीरहरु सोसल मिडियामा शेयर गरिन् । ती तस्वीर यति भाइरल बने की तस्वीरहरुमा कमेन्ट तथा लाइकको बाढी नै आयो ।
आफ्नो एक हट फोटोमा उनी सनबाथ गरिरहेको अवस्थामा देखिएकी छिन् । जसमा उनले बिकिनी लगाएकी छिन् । मानिसहरुले उनको उक्त तस्वीर खुबै रुचाएका छन् |
सोसल साइटमा यी तस्वीर भाइरल बनेसँगै ओक्सानालाई विश्वकै सबैभन्दा सुन्दर र हट गणित शिक्षिका भन्न थालिएको छ । विश्वका मानिसहरुले आफ्ना तस्वीर मन पराएकोमा र आफुलाई दुनियाकै हट शिक्षिका भनेकोमा उनी मख्ख छिन् ।
संवेदनशील अंगमा बोल्ट कटर लगाउनु पर्ने यो कस्तो आपत्त !
यौनसाथीको उत्तम विकल्पको रुपमा सेक्स टोयहरु बजारमा छ्याप छ्याप्ती पाइन्छन् । त्यस्ता खेलौना यौन सामाग्रीको प्रयोगका थोरै सावधानी अपनाउन नसक्दा धेरै मानिसहरु अस्पताल पुग्न बाध्य छन् । यस्तै भएको थाइल्याण्डका एक पुरुषलाई ।
सेक्स टोयको प्रयोगको असावधानीका कारण थाइल्याण्डका एक पुरुषको लिंगमा अड्किएको रिङ निकाल्न बोल्टकटरकै प्रयोग गर्नु परेको छ ।
उनले सेक्सटोयको प्रयोग घरमै बसेर गरिरहेका थिए । प्रयोग गर्दा पीडा भएपछि उनले थाहा पाए कि उनको लिंगमा त रिङ अड्किरहेको रहेछ । उनले निकाल्ने प्रयास गरे तर, सकेनन् ।
उनले आकस्मित सेवामा सम्पर्क गरे र एम्बुलेन्समार्फत अस्पताल पुगे ।
तस्वीरमा देखिएजस्तै अस्पतालमा २ फिट लामो बोल्टकटर र एक हेक्साको सहायताबाट लिंगमा घुसेको रिङ निकालियो । उनको अपरेसन चल्दै गर्दा उपचारका संग्लग्न चिकित्सकहरुले पनि आफ्नो हाँसो रोक्न संघर्ष गर्नुपरेको थियो । तीस बर्षीय पुरुषको परिचय गोप्य राखिएको छ ।
स्वयम्सेवी उद्धारकर्ता जाकचाई बानयेनसाकुलका अनुसार ती पुरुषले घरमै सेक्स गेमका क्रममा आफ्नो लिंगमा त्यो धातुको औंठी घुसाएका थिए । उनले थपे, ‘म यकिन हुन सकिरहेको छैन कि उनले यो रिङ कुनै पसलबाट किने कि कुनै ग्यारेजमा भेट्टाए ।’
‘तर यो रिङ उनले आफ्ना लिंगअनुसार नापेका थिएनन् । रिङ लिंगमा घुसाइसकेपछि जव उनको लिंग उत्तेजित भयो र रिङ भित्रै नराम्रोसँग अड्कियो ।’ उनले भने, ‘उनी निक्कै चिन्तित थिए । उनले अस्पतालको आकस्मिक सेवामा खवर गरेका थिए र स्वयम्सेवी उद्धारकर्ताले उनलाई अस्पतालसम्म लान सघाएका थिए । उनी निक्कै पीडामा रहेको देखिन्थे ।’
उद्धारकर्ता बानयेनसाकुलका अनुसार अस्पतालमा डाक्टरले लिंगबाट रिङ छुटाउनका लागि सुरुमा तेलको प्रयोग गरेका थिए । तर भएन ।
डाक्टरहरुले रिङ छुट्याउनका लागि सावुनपानीको झोल पनि प्रयोग गरे । यो उपाय अपनाउँदा पीडितले निक्कै पीडा महशुस गरे तर, रिङ बाहिर निस्केन ।
यतिसम्मकि डाक्टरले हेक्साको प्रयोग गरेपनि एक छेउ पनि लगाउन सकेन । त्यसपछि अन्तिम उपायको रुपमा बोल्ट कटर प्रयोग गरियो । लिंगसँगै रिङको तल्लोपटि धातु राखेर बोल्ट कटरले रिङ काटियो र लिंगबाट छुट्याइयो ।
त्यो धातुको रिङ यति बलियो थियो कि लिंगबाट त्यसलाई छुटाउन डाक्टरहरुलाई तीन घण्टा लागेको थियो । लिंगलाई उत्तेजित बनाइराख्नका लागि पुरुषहरुले सेक्स रिङको प्रयोग गर्छन् ।
भाग्यबस कुनै चोट लागेको छैन र उनी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेका छन् ।
लाइभ शो मै पत्रकारले खुस्काइदिए अभिनेत्रीको छातिको कपडा
स्पेनमा एक टेलिभिजन कार्यक्रममा एकजना महिला अभिनेत्रीलाई लाजमर्नु भएको छ ।
टेलिभिजनमा लाइभ कार्यक्रम चलिरहेको बेला कार्यक्रम संचालकले ती अभिनेत्रीमाथि जुन हर्कत गरे त्यसले ती महिलालाई त लाजमर्नु भयो नै कार्यक्रममा उपस्थित अन्य व्यक्ति तथा टेलिभिजन हेर्नेलाई समेत …..लाई भन्दा देख्नेलाई लाज भनेझैँ भयो ।
लाइभ टिभी शो चलिरहेका बेला कार्यक्रम संचालकले योला ब्याररोकल नामकी ती महिला अभिनेत्रीको कपडा खुस्काइदिए । जसका कारण अभिनेत्रीको एउटा वक्ष बाहिरै देखियो । अभिनेत्रीले हत्त न पत्त खुस्किएको टप्स माथि सासेर नांगो वक्ष ढाकिन् र आश्चर्यभाव प्रकट गरिन् । उनको कपडा खुस्किएर स्तन देखिएसँगै टेलिभिजनमा हाँसो गुन्जिएको सुन्न सकिन्छ र अन्य उपस्थित मानिसहरु पनि छक्क परेको देखिन्छ ।
कार्यक्रम प्रस्तोताले कुराकानीकै क्रममा त्यसरी अभिनेत्रीले छातिको लुगा खुस्काइदिने काम जानीजानी गरेका हुन् वा अन्जानमै त्यस्तो गल्ती भयो भन्ने चाहीँ खुलेको छैन ।
प्रस्तोताले आफुमाथि त्यस्तो हरकत गरेर आफ्नो बेइज्जत गरेपछि रिस र लाजले रातोपिरो हुँदै ती अभिनेत्री उठेर हिँडिन् । उनीसँग ती कार्यक्रम प्रस्तोता तथा टेलिभिजनका अन्य मानिसहरुको समेत सवाल जवाफ भएको सुन्न सकिन्छ । सायद उनीसँग माफी माग्दै कार्यक्रममै बस्न आग्रह गरिएको हुनसक्छ ।
एकजना अर्का प्रस्तोताले उनलाई धेरै आग्रह गरेपछि उनी बल्ल पुनः कार्यक्रममा सहभागी हुन राजी भएर कुर्सीमै फर्किएको भिडियोमा देख्न सकिन्छ । यो भिडियो निकै भाइरल बनेको छ र ४ लाख भन्दा धेरैले हेरिसकेका छन् ।
यी हुन् निर्वस्त्र भएर बिरामीको उपचार गर्ने डाक्टर युवती, एकपटक जाँचेको १० हजार
विश्वमा यस्ता केही ठाउँहरु छन् जहाँ महिलाहरुको वर्चस्व रहेको छ । यी महिलाहरु पुरुषमाथि निर्भर हुँदैनन् । इण्डोनेसियामा पनि एउटा यस्तो आदिवासी समुदाय छ जसमा मातृसत्तात्मक व्यवस्था छ ।
त्यहाँ महिलाहरुलाई पूर्ण स्वतन्त्रता रहेको रहेको छ । महिलाहरु एकसाथ खुलेआम धेरै पुरुषसँग यौन सम्बन्ध कायम गर्न सक्दछन् ।
महिलाहरु आफुले चाहेको पुरुषलाई सम्भोगका लागि अफर गर्छन् । जुन पुरुषले महिलाको अफर अस्विकार गर्दछन् त्यस्तो पुरुषलाई महिलाहरु यस्तो कारवाही गर्छन् जसको कल्पना सम्म पनि गर्न सकिँदैन ।
इण्डोनेसियाको पपुवा प्रान्तमा बस्ने ट्रोबियान्ड आदिवासीमा महिलाहरुलाई विशेष अधिकार छ । यो समुदायका महिलाहरु आफ्नो मन परेको पुरुषसँग हरेक प्रकारको सम्बन्ध बनाउन स्वतन्त्र हुन्छन् ।
महिलाहरुले सेक्सका लागि प्रस्ताव गर्ने पुरुष ती महिलासँग सेक्स गर्न बाध्य हुनुपर्छ ।
यदि कोही पुरुषले महिलाको यौन आकांक्षा पूरा गर्न अनिक्षा प्रकट गर्यो वा अफर अस्विकार गर्यो भने उसले निकै बेइज्जतीपूर्वक सजायँ भोग्नुपर्छ । महिलासँग यौनसम्पर्क कायम गर्न अस्विकार गर्ने पुरुषमाथि महिलाहरुले पिसाब फेरिदिन्छन् । महिलाहरुलाई आफ्नो प्रस्ताव अस्विकार गर्ने पुरुषमाथि पिसाब फेरिदिएर कारवाही गर्ने स्वतन्त्रता छ ।
उक्त आदिवासी समुदायमा हरेक वर्ष याम नामक पर्व मनाइन्छ । त्यस क्रममा महिलाहरु झाडीमा लुकेर पुरुषहरुसँग यौन सम्पर्क कायम गर्नका लागि रिझाउँछन् । अ।नि उक्त पर्वमा मात्रै पुरुषलाई सेक्सका लागि महिला छान्ने अधिकार हुन्छ ।
उक्त पर्वको बेला पुरुषहरु झाडीकै आसपास घुम्दछन् । त्यसक्रममा झाडीमा लुकेका महिलामध्ये जो मन पर्छ उनैसँग सम्भोगका लागि झाडिभित्र छिर्न पाउँछन् । मन नपरेको महिलासँग सेक्स गर्नुपर्ने बाध्यता त्यस एक दिन भने पुरुषहरुलाई हुँदैन ।
जब आकाशबाट पानीसँगै माछा वर्षिन थाले
भारतको राजस्थानस्थित भरतपुरमा हालै अचानक आकासबाट माछा खस्न थाले । आकाशबाट माछा वषिर्न थालेपछि मानीहरुमा हगामा मच्चिन थाल्यो । मानिसहरुले सुरुमा त केही मेसो पाएनन् । तर पछि चाल पाए की आकाशबाटै वर्षाको पानीसँगै माछाको पनि वर्षा भएको रहेछ ।
भरतपुर जिल्लाको रुपबास इलाकामा बिहिबार राति भएको वर्षाका क्रममा आकासबाट मासु पनि र्झन थाले । मानिसहरुले आफ्नो घरको छानोमा पनि केही खसेको आवाज सुने । पछि हेर्दा त आफ्नो आँगन, छत तथा सडकमा समेत माछाको विस्कुन देखियो ।
यद्यपि आकासबाट माछा खसेको यो पहिलोपटक होइन । यसअघि पनि कैयन् ठाउँमा यसरी वर्षाको पानीसँगै माछा खसेको घटना सार्वजनिक भएको थियो । मुम्बइ पूणे राजमार्ग तथा आन्ध्रप्रदेशमा पनि यस्तै घटना भएको थियो ।
तर वैज्ञानिकहरुले भने यस्तो घटनालाई सामान्य रुपमा लिन्छन् । समुद्रमा आउने तिव्र गतिको तुफानका क्रममा उक्त तिव्र गतिको हावाले समुद्रमा भएका माछा तथा अन्य जिवहरुलाई उडाएर लैजान्छ । हावाको गति कम नहुन्जेलसम्म ती जिवहरु ऋाकाशमै तैरिन्छन् । हावाको गति कम भएसँगै भने माछा तथा अन्य जिवहरु ज्मिनमा खस्दछन् ।
छोराको बिहेमा बाबुआमालाई गाडीमा बाँधेर सहर परिक्रमा
आफ्नो छोराको बिहे बाबुआमाका लागि निकै ठूलो खुसीको अवसर हो । तर त्यहीँ छोराको बिहेमा बाबुआमालाई बाँधेर सहर परिक्रमा गराइयो भने के होला ?
सायद यदि नियतबस कुनै छोराले आफ्नो बिहेमा बाबुआमालाई बाँधेर सहर परिक्रमा गरायो भने त त्यो भन्दा ठूलो अपमान के पो होला र ? तर आखिर संस्कार र परम्परा नै यस्तो भएपछि चाहीँ कसैको केही लाग्दो रहेनछ ।
हो चीनमा यस्तै परम्परा छ । जहाँ छोराको बिहेमा बाबुआमालाई डोरीले गाडीमा बाँधेर सडकमा हिडाएर सहर घुमाइन्छ, जबकी त्यो गाडी बेहुलो छोराले नै चलाएको हुन्छ । यसरी बेहुलाको बुवालाई बाँधेर सहर परिक्रमा गराउने परेडमा थुप्रै मानिस सहभागी हुन्छन् ।
चीनको हेनान प्रान्तमा रहेको यो अनौठो परम्परा सुन्नेलाई नै निकै दयालाग्दो छ । यसरी छोराले गाडीमा बाँधेर सहर परिक्रमा गराइरहँदा ती गाइगोरुजस्तै बाँधिएर लुरुलुरु हिँडिरहेका बुवा आमालाई उनीहरुका साथी तथा आफन्तले खिसिट्युरी गरेर तथा जिस्काएर हैरान बनाउँछन् ।
तर यसरी बाँधिएर सडकमा घुम्दा तथा दुनियाले जिस्काउँदा पनि बेहुलाका मातापिताले पटक्कै दुख मान्दैनन् । परम्परा निभाउन पाउँदा आनन्द मान्छन् ।
जेलको हावा खान कसलाई मन पर्छ र ? जेलको नाम सुन्दैमा जिरिंग हुन्छ जिउ । अपराध गरिसकेपछि पनि जेल जान नपरोस् भनेर मानिसहरुले कस्ता कस्ता तिकडम गर्छन् भन्ने कुरा हामीले देखे सुनेकै हो ।
तर यदि कोही मानिसले जेल जानबाट बँच्नका लागि होइन कुनै जेलमा कैदी हुनका लागि ठूलै सोर्सफोर्स लगाउनुपर्ने अवस्था आयो भने के होला ?
जेलमा जानका लागि सोर्सफोर्स ? यो त्यति पत्यार लाग्ने कुरा भएन । तर सत्य हो । भारतको मध्यप्रदेशस्थित होसंगाबाद जिल्लामा एउटा यस्तो जेल छ जसमा बस्नका लागि कैदीहरु हृारगुहार गर्दछन् । यो जेलमा बस्नका लागि कैदीहरुले ठूला ठूला नेताहरुको सोर्सफोर्स लगाउँछन् । जेलमा २५ जना कैदी अट्छन् । तर जेलमा बस्न पाउँ भनेर २ सय भन्दा बढिले आवेदन गर्दछन् ।
वास्तवमा यो जेलमा जानका लागि कैदीहरु मरिहत्ते गर्नुको कारण चाहीँ यो खुल्ला जेलभित्र व्यवसाय तथा जागिर गर्ने राम्रो सुविधा छ । कतिपय कैदी त यहीँ जेलभित्र बसेर व्यवसाय गर्दै लखपति समेत बनिसकेका छन् ।
मध्यप्रदेशमा रहेको यस प्रकारको खुल्ला जेल यो पहिलो हो । यो जेलमा जानका लागि कैदीहरुबीचमा हानथाप र ठूलाबडाको सोर्सफोर्स र दबाब हुने भएपनि यहाँ कुनै सोर्सफोर्स लाग्दैन र जेलले नै कस्ता कैदीलाई राख्ने भन्ने छनोट गर्दछ ।
खासगरी बाध्यताबस अपराधको दलदलमा फसेका कैदीहरुले यहाँ स्थान पाउँछन् । साथै परिवार भएका र कैद सजाय भुक्तानी हुनै लागेका कैदीहरुले प्राथमिकता पाउँछन् ।
हाम्रो शुभबिहानी एप आफ्नो अन्दोरिड मोबाइल मा डाउनलोड गर्नुहोस >> SHUBHABIHANI.COM
धनाढ्यले किनिदिए कुकुरलाई ८ वटा आइफोन
यो दुनियाका धनाढ्यहरुले कहिलेकाहीँ गरीबहरुको खिल्ली उडाउँछन् । गरीबलाई सहयोग गर्न उनीहरुको हात अघि बढ्दैन तर फजूलमा अनावश्यक खर्च गरी चर्चा बटुल्ने धृष्टता गर्दछन् । एकजना चिनिया धनाढ्यले यस्तैगरेका छन् ।
चिनिया संचारमाध्यमहरुका अनुसार चीनका सबैभन्दा धनी व्यक्ति वांग जियानलिनका छोराले आफ्नो कुकुर कोकोका लागि ८ वटा आइफोन सेभेन किनिदिएका हुन् ।
२३ अर्ब डलर सम्पत्तिका मालिक वांगका छोराले आफ्नो पाल्तू कुकुरका लागि आइफोन सेभेनका अलावा एप्पलको स्मार्ट घडी लगायतका ग्याजेट पनि किनिदिएका छन् ।
सोसल मिडियामा अर्बपतिको उक्त भाग्यमानी कुकुरको फोटो भाइरल बनेको छ । फोटोमा कुकुरको सामुन्ने आइफोन सेभेनको थुप्रो छ । अझ रोचक कुरा त के भने चीनमा यो कुकुर साँच्चीकै सेलिब्रेटीको रुपमा रहेको छ । सोसल मिडियामा यसका १९ लाखफलोअर्स छन् ।